Ciidamada Somaliland oo rasaaseeyay Banaanbax ay dhigayeen mucaaradka & khasaaro ka dhashay | dayniiile.com
Home WARKII Ciidamada Somaliland oo rasaaseeyay Banaanbax ay dhigayeen mucaaradka & khasaaro ka dhashay
Ciidamada Somaliland oo rasaaseeyay Banaanbax ay dhigayeen mucaaradka & khasaaro ka dhashay
Waxaa Maanta Magaalada Hargrysa ee degaannada Somailand ka bilaawday Banaanbax rabshado wato oo ay dhigayaan Xisbiyada mucaaradka Somaliland, waxaana rasaaseeyay Ciidamada Booliska.
Banaanbaxa oo uu horkacayay Guddoomiyaha Xisbiga Kucaaradka ah ee WADANI ayaa rasaastii ay ku fureen Ciidamada Booliska waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen Xildhibaan Barkhad Batuun masuuliyiin iyo Shacab, kuwaas oo la geeyay Isbitaalka Magaalada Hargeysa.
Banaanbaxa ayaa waxaa Mucaaradka ay uga soo horjeedaan dib u dhigidda doorashada Madaxweynaha oo ku beegan bisha November ee sanadkaan, waxaana banaanbaxayaasha ay ku dhawaaqayeen Muuse Biixi ha dhaco iyo Erayo kale.
Xaaladda Magaalada Hargeysa ayaa Maanta kacsan, waxaana inta badan xiran Goobaha Ganacsiga, iyada oo Baraha Bulshada lagu faafiyay muuqaalo muujinaya Ciidamada Booliska Somaliland oo jirdilaya Haween ka qeyb galaya banaanbaxa.
Previous articleRa’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Muqdisho kusoo dhoweeyay Ra’iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli.
Next articleMadaxweynayaasha Jabuuti iyo Kenya & RW Itooboya oo Muqdisho soo gaaray
Extremists in Sweden have been accused of ‘abusing the Holy Qur’an,’...
Maxkamad 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay musharaxii hore ee...